Juventus Oo Weli Xiiseyneysa Inay La Soo Wareegto Xiddiga Manchester City Gabriel Jesus
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo weli xiiseyneysa inay la soo wareegto xiddiga Manchester City Gabriel Jesus
September 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa weli xiiseynayso Manchester City xidigeeda Gabriel Ciise , waxaana laga yaabaa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer Brazil inta lagu jiro xagaaga soo socda ee suuqa kala iibsiga.
24 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Etihad Stadium horaantii xagaagan, laakiin suuqa kala iibsiga ayaa xiran iyadoo weeraryahankii hore uu weli ku jiro kooxda Pep Guardiola .
Imaatinka Harry Kane ee Man City ayaa hoos u dhigi lahaa Jesus dalabkii ugu sareeyay ee kooxda, laakiin Citizens ma awoodin inay dhameystirto heshiiska weeraryahanka Tottenham Hotspur.
Mustaqbalka fog ee Ciise ee Manchester ma cadda, iyadoo kooxda heysata horyaalka Ingiriiska la filayo inay la soo saxiixato weeraryahan heer sare ah sannadka 2022.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Juventus, oo u oggolaatay Cristiano Ronaldo inuu ka tago kooxda goor dambe oo suuqa ah, ayaa weli xiiseyneysa Koonfurta Ameerika.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Marwada Duqda ah ay ‘diyaar u tahay inay weerar ku qaado’ marxaladda qaar sanadka soo socda, in kasta oo aysan u badnayn inay ku qancin karaan Man City iibinta bisha Janaayo.
Jesus – oo qandaraas kula jira kooxda Guardiola ilaa Juun 2023 – ayaa dhaliyay hal gool waxaana uu caawiyay seddex caawin afar kulan oo uu u saftay Citizens xilli ciyaareedkan.